Wax Waliba Oo Kaga Baahan Tahay Falanqeynta Kooxaha Atletico Madird Iyo Chelsea
HomeChampions LeagueWax waliba oo kaga baahan tahay Falanqeynta kooxaha Atletico madird iyo Chelsea
February 23, 2021 Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxaha ka kala socdan Spian iyo England ee chelsea iyo Athletico madrid ayaa caawa isku dhegan kulan qeyb ka ah Wareega 16 ka tartanka champions league Atlético Madrid iyo Chelsea marka la fiiryo tartamada Yurub waa mid isku dheelitiran oo waxa ay leeyihiin laba guul midkiiba iyo seddex barbaro iyadoo kulankaan iska dhaliyeen 11 gool midkiiba.
Atlético Madrid ayaa ka adkaatay kulankoodii hore ee UEFA Champions League ee ay la ciyaareen Chelsea – waxa ay aheyd semi-finalka 2013/14 ciyaar 3-1 wadar ahaan ku idlaatay.
Atlético Madrid ayaa gaartay wareega 16ka ee Champions League markii 7aad sideedii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay. Dhanka kale, Chelsea waxay isku dayi doontaa inay ka gudubto wareega 16ka markii ugu horeysay tan iyo ololaha 2013/14 (semi-finalists).
Diego Simeone waligiis guuldarro kama soo gaarin garoonkiisa isagoo ah macalinka Atlético Madrid wareega 16ka ee UEFA Champions League 9 kulan guul ayuu gaaray halka 4 jeer uu barbardhac helay Xaqiiqdii, Atletico ayaa kaliya laga dhaliyay hal gool 12kii kulan ee ugu dambeysay ee UCL oo ee garoonkooda Vicente Calderón ama Wanda Metroplitano ku ciyaareen kaasoo ka hor yimid kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid bishii May 2017 ayaa guul daro 2-1 kala kulmeen Real madrid.
Chelsea ayaa ah kooxdii ugu dambeysay ee ku garaacda Atlético Madrid ciyaar ka baxsan tartamada Yurub – waxay aheyd bishii Sebtember 2017, waana kulankii ugu horeeyey ay Atlético ku ciyaartay garoonkeeda cusub ee Wanda Metroplitano (1-2).
Atlético Madrid ayaa dhalisay kaliya 7 gool lix kulan oo ay ciyaareen xilli ciyaareedkan, waana kooxda ugu hooseysa 16ka koox ee isugu soo haray tartanka.
Chelsea ayaa raadineysay wadar ahaan afar daqiiqo intii lagu jiray xilli ciyaareedkaan wareega group-yada UEFA Champions League, in ka yar kooxaha kale. Sidoo kale, kaliya Manchester City (1) ayaa laga dhaliyay goolal ka yar kooxda London (2) wareega group-yada.
Chelsea ayaa ka mid aheyd afar koox oo kaliya oo ku guuleysatay dhamaan seddexdii kulan ee ay marti ahaayeen xilli ciyaareedkaan, iyadoo ay wehliyaan Atalanta, Barcelona iyo Juventus; Waxay sidoo kale dhaliyeen goolal ka badan marka loo fiiriyo kooxaha kale waana 10 gool Si kastaba ha noqotee, guushoodii ugu dambeysay ee ay ka gaaraan wareega 16ka ee tartamada ayaa ku beegan March 2012 oo ay la ciyaareen Benfica ciyaar ku dhamaatay 1-0.
Weeraryahanka Atlético Luis Suarez waligiis kuma uusan guuleysan inuu dhaliyo ama gacan ka geysto xilli ciyaareedkan UEFA Champions League – kani waa ololihiisii sideedaad ee tartankan. Waxa uu ilaa iyo haatan yahay qof aan wax caawinaad ah ka helin afarta kulan ee uu la ciyaaray kooxda Madrid 2020/21.
Weeraryahanka Chelsea Olivier Giroud ayaa shabaqa soo taabtay 28kii daqiiqoba mar wareega group-yada Champions League xilli ciyaareedkan (5 gool 142 daqiiqo uu kasoo muuqaday, waana saamiga ugu fiican ee ciyaaryahan walba uu dhaliyo wax ka badan hal gool.
Ciyaartoyda ilaaliya inay ciyaaraan ugu yaraan seddex kulan oo UEFA Champions League xilli ciyaareedkan, waa ciyaaryahanka Chelsea Edouard Mendy ayaa leh boqolkiiba badbaadin ugu fiican tartanka (94%), kaliya waxaa laga dhaliyay mid ka mid ah 16 darbo oo lala bartilmaameedsaday ilaa haatan.